IINDLELA EZI-3 ZOKUCIMA IIFAYILE EZIKHUSELWE NGUTRUSTEDINSTALLER NGAPHAKATHI WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Windows 10 Hlaziya
Iindlela ezi-3 zokucima iiFayile eziKhuselwe yiTrustedInstaller
Iposwe kwiIgqityelwe ukuvuselelwa: ngoFebruwari 16, 2021
Uzicima njani iiFayile eziKhuselwe nguTrustedInstaller ngaphakathi Windows 10: I-TrustedInstaller yinkqubo ye-Windows Modules Installer ephethe iifayile ezininzi zenkqubo, iifolda, kunye nezinye iinkqubo. Ewe, iTrustedInstaller yiakhawunti yomsebenzisi esetyenziswa yinkonzo yokuFakela iiModyuli zeWindows ukuze ube nolawulo kwezi fayile zenkqubo ekhuselweyo kunye neefolda. Kwaye ewe nokuba ungumlawuli ayingowakho kwaye awukwazi ukuziguqula ezi fayile nangayiphi na indlela.
Ukuba uzama ukuthiya ngokutsha, ucime, uhlele ezi fayile okanye iifolda ezizezakwaTrustedInstaller uya kugqiba ufumane umyalezo wemposiso othi Awunamvume yokwenza esi senzo kwaye ufuna imvume evela kwiTrustedInstaller ukwenza utshintsho kule fayile okanye incwadi eneenkcukacha. .
Ewe, ungakhathazeki ukuze ucime iifayile ezikhuselwe yiTrustedInstaller ngaphakathi Windows 10 kufuneka uqale uthathe ubunini befayile okanye ifolda ozama ukuyicima. Nje ukuba ubunini ngoko unokunika ulawulo olupheleleyo okanye imvume kwiakhawunti yakho yomsebenzisi.
Imixholo[ fihla ]
Ngaba ndingayicima iakhawunti yomsebenzisi weTrustedInstaller kubunini befayile?
Iindlela ezi-3 zokucima iiFayile eziKhuselwe nguTrustedInstaller ngaphakathi Windows 10
Indlela yoku-1: Thatha ngesandla ubunini beeFayile okanye iiFolda kwiWindows 10
Indlela yesi-2: Thatha ubunini beeFayile/iiFolda kwiWindows 10 usebenzisa iRegistry
Indlela yesi-3: Sebenzisa iSicelo seQela lesithathu ukuTshintsha ubunini beFayile okanye iFolda
Ngamafutshane, ewe unako kwaye kubalulekile ukuba ungenzi ngenxa yokuba i-akhawunti yomsebenzisi yeTrustedInstaller yenzelwe ukukhusela iifayile zenkqubo kunye neefolda, umzekelo, ukuba i-virus okanye i-malware ihlasela kwi-PC yakho abayi kukwazi ukulungisa iifayile zenkqubo okanye Iifolda kuba ezi fayile & neefolda zikhuselwe yiTrustedInstaller. Kwaye ukuba usazama ukucima iakhawunti yomsebenzisi weTrustedInstaller kubunini befayile, uya kufumana umyalezo wempazamo othi:
Awukwazi ukususa iTrustedInstaller kuba le nto ifumana iimvume kumzali wayo. Ukususa i-TrustedInstaller, kufuneka uthintele le nto ekufumaneni iimvumelwano njengelifa. Cima ukhetho lokufumana iimvumelwano njengelifa, uze uzame kwakhona.
Njengoko kulula kunokuba kuvakala kodwa inkqubo yokuthatha ubunini befayile inde kancinci kodwa ungakhathazeki yiyo loo nto silapha. Kweli nqaku, ndiza kukuhamba ngesinyathelo ngesinyathelo kwisikhokelo sendlela yokucima iiFayile eziKhuselwe yiTrustedInstaller kwi Windows 10 ngokuthatha ubunini befayile okanye ifolda umva kwiTrustedInstaller.
Qiniseka ukuba yenza indawo yokubuyisela nje ukuba kukho into engahambi kakuhle.
Indlela yoku-1: Ngesandla Thatha ubunini beeFayile okanye iiFolda Windows 10
1.Vula ifayile okanye ifolda ofuna ukuthatha ubunini kuyo TrustedInstaller.
Mbini. Cofa ekunene kwifayile ethile okanye incwadi eneenkcukacha kwaye ukhethe Iipropati.
3.Tshintshela kwi Ithebhu yokhuseleko emva koko ucofe kwi Iqhosha eliphezulu.
4.Oku kuya kuvula i window Advanced Security Settings apho unokubona ukuba i I-TrustedInstaller inoLawulo olupheleleyo kule fayile okanye incwadi eneenkcukacha.
5.Ngoku ecaleni kwegama loMnikazi (eliyiTrustedInstaller) cofa apha Guqula.
6.Oku kuya kuvula i Khetha Umsebenzisi okanye iQela ifestile , ukusuka apho kwakhona nqakraza kwi Iqhosha eliphezulu emazantsi.
7.Ifestile entsha iya kuvula, cofa kwi Fumana Ngoku iqhosha.
8.Uya kubona yonke iakhawunti yomsebenzisi edweliswe kwi Iziphumo zokukhangela: icandelo, khetha iakhawunti yomsebenzisi kolu luhlu ukwenza umnini omtsha wefayile okanye incwadi eneenkcukacha kwaye ucofe Lungile.
9.Kwakhona nqakraza ku-Kulungile kwi- Khetha uMsebenzisi okanye iQela ifestile.
10.Ngoku uya kuba kwi-Advanced Security Settings window, apha uphawu lokukhangela Faka endaweni yomnini kwizikhongozeli kunye nento ukuba ufuna ukucima ngaphezu kwefayile enye kwifolda.
11.Cofa u-Fakela kulandele uLungile.
12.Ukusuka kulawulo okanye ifayile yeepropathi zefestile, nqakraza kwakhona kwi Iqhosha eliphezulu phantsi kwe Ithebhu yokhuseleko.
13.Akukho nqakraza Yongeza iqhosha ukuvula ifestile yoNgeniso lweeMvume, emva koko ucofe ku Khetha inqununu ikhonkco.
14.Kwakhona cofa Iqhosha eliphezulu uze ucofe ku Fumana Ngoku.
Shumi elinantlanu. Khetha iakhawunti yomsebenzisi ukhethe kwinyathelo lesi-8 kwaye ucofe u-Kulungile.
16.Uya kuphinda usiwe kwifestile yokuNgena kweeMvume, ukusuka apho ufuna ukuya khona phawula zonke iibhokisi phantsi Iimvume ezisisiseko .
17. Kwakhona, uphawu lokukhangela Faka ezi mvume kuphela kwizinto kunye/okanye kwizikhongozeli ezingaphakathi kwesi singxobo kwaye ucofe u-OK.
18.Uya kufumana isilumkiso sokhuseleko, cofa Ewe ukuqhubeka.
19.Nqakraza ku-Apply elandelwa ngu-Kulungile, kwaye kwakhona ucofe u-OK kwifayile yefayile/ifolda yeepropathi zefestile.
20.Uphumelele utshintshe ubunini befayile okanye incwadi eneenkcukacha, ngoku ungalungisa, uhlele, uthiye ngokutsha okanye ucime loo fayile okanye ulawulo ngokulula.
Ngoku unako ngokulula cima iifayile ezikhuselwe nguTrustedInstaller ngaphakathi Windows 10 usebenzisa le ndlela ingasentla, kodwa ukuba awukuthandi ukuhamba ngale nkqubo inde ungasebenzisa le ndlela ingezantsi ukongeza Thatha ubuNkokheli kwimenyu yokucofa ekunene kwaye ngokulula uthathe ubunini bayo nayiphi na ifayile okanye incwadi eneenkcukacha Windows 10 .
1.Vula ifayile yeNotepad emva koko ukope kwaye uncamathisele le khowudi ilandelayo kwifayile yenotepad:
2.Ukusuka kwi-Notepad menu cofa kwiFayile uze ukhethe Yigcine njenge.
3.Ukusuka ku Gcina njengohlobo lokuthoba-phantsi khetha Zonke Iifayile (*.*) kwaye emva koko uchwetheze igama lefayile elinokuba yiyo nantoni na oyifunayo kodwa qiniseka ukuba kunjalo yongeza .reg ekupheleni kwayo (umz. takeownership.reg) kuba olu lwandiso lubaluleke kakhulu.
4.Hamba uye apho ufuna ukugcina khona ifayile ngokukhethekileyo kwidesktop kwaye ucofe kwi Gcina iqhosha.
5.Ngoku cofa ekunene kwifayile engentla (Registry_Fix.reg) kwaye ukhethe Faka ukusuka kwimenyu yomxholo.
Phawula: Uya kudinga iakhawunti yomlawuli ukufaka iskripthi kwiifayile zobhaliso zeWindows.
6.Cofa Ewe ukongeza le khowudi ingasentla kwiRegistry yeWindows.
7.Xa okushicilelweyo kungentla kufakelwe ngempumelelo, ungathabatha ngokulula ubunini bayo nayiphi na ifayile okanye incwadi eneenkcukacha oyifunayo ngokunqakraza-ekunene kuyo kwaye emva koko ukhethe. Thatha Ubunini ukusuka kwimenyu yomxholo.
8.Nangona kunjalo, ungasikhupha esi script singasentla nangaliphi na ixesha ofuna ngokuphinda ulandele amanyathelo ukusuka ku-1 ukuya ku-4 kodwa ngeli xesha, sebenzisa le khowudi ilandelayo:
9.Kwaye gcina ifayile enegama Uninstallnership.reg.
10.Ukuba ufuna ukususa i Thatha Ubunini ukhetho kwimenu yentsingiselo, ngoko cofa kabini kwi Uninstallownership.reg ifayile kwaye ucofe ku Ewe ukuqhubeka.
Ngoncedo lwe Thatha isicelo soBunini , uya kuba nakho ngokulula ukuthatha ubunini bayo nayiphi na ifayile okanye incwadi eneenkcukacha oyifunayo kwaye emva koko ucime iifayile ezikhuselwe yiTrustedInstaller. Isicelo sisebenza ngendlela efanayo nale ndlela ingasentla kodwa kufuneka ufake isoftware kuphela endaweni yokwenza iskripthi ngokwakho.
Faka nje isicelo sokuThatha ubunini kwaye iyakongeza i Thatha Ubunini ukhetho kwimenyu yokucofa ekunene ye Windows 10.
Ulungiso lweSicelo luvaliwe ekufikeleleni kwihardware yeGraphics
Lungisa Ufuna Imvume Yokwenza Lemposiso Yesenzo
Uyenza njani iakhawunti ye-Windows 10 usebenzisa iGmail
Lungisa iMicrosoft Edge ayisebenzi kuyo Windows 10
Ndiyathemba ukuba la manyathelo angasentla akwazile ukukunceda Cima iiFayile eziKhuselwe nguTrustedInstaller ngaphakathi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo okanye inkonzo yeTrustedInstaller ke zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.
U-Aditya yingcaphephe yetekhnoloji yolwazi ozikhuthazayo kwaye ebengumbhali wetekhnoloji kule minyaka isi-7 idlulileyo. Ugubungela iinkonzo ze-Intanethi, iselfowuni, iWindows, isoftware, kunye nezikhokelo zeNjani.
Windows 10 Iimpawu
Fumana Isisombululo Kuzo Zonke Iingxaki Ngewindows 10
Copyright ©2022 | cyberschool.ac | Umthetho Wabucala